> Resource > Video > magaabay RMVB: Sida loo jar RMVB faylasha la Loss Tayada No
Ma doonaysaa in aad ka gooyay a video RMVB weyn clips ka yar ama laga soo gooyay oo qayb ka mid ah RMVB? Tan iyo RMVB waxaa loogu talagalay gudbinta video live internet-ka oo ay RealNetworks, oo wuxuu isticmaalaa noocyo kala duwan oo farsamooyin riixo xogta, waxaad ka heli kartaa RMVB waa in aynan ugu codsiyada video tafatirka. Nasiib wanaag, waxa jira qaar ka mid ah qalabka goynta video aad u wanaagsan sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) oo kaa caawin kara akana dhawrsada waa fudud u jari doonaa qayb ka mid ah RMVB video (Start, Dhexe, End) ee oo kaliya dhowr qasabno.
Download Free RMVB maxkamad magaabay version:
Ka dib markii ay ku rakibidda magaabay RMVB this, waxa maamula. Daaqadda barnaamijka, fadlan guji "Import" in ay ku shuban RMVB videos aad. Dhammaan RMVB videos daray tusi doonaa sida thumbnails in User ee Album. Ka dib markii in, jiididda iyo si toos ah hoos u files RMVB aad galay Timeline video ah.
2 Goo videos RMVB
Tani magaabay RMVB smart aad siinayso awood ay kaga jaray meel kasta oo aad RMVB video. Just raac tallaabooyinka hoos ku qoran.
Iska yaree Start / End : 1. U dhaqaaq cas Time Tusiyaha bidix ama midig si ay u helaan booska saxda aad rabto in aad ka gooyay. 2. Hit icon Sissor ee bar qalab si ay u kala jabeen laba qaybood oo qayb ka. Hadda waxaad jari karaa Start ama End ay kaliya ku dhacay "Delete".
Iska yaree boos kasta oo : Isticmaal habka kor ku xusan in aan kala tagno file RMVB aad dhowr qaybaha hore. Markaas ka qaad clips ku aadan rabin inay dilaan "Delete" on keyboard ah.
3 dhoofinta file cusub RMVB
Hadda waxaad si guul jari clips rabin, kaliya ka dhacay Abuur inay u dhoofiyaan abuurkiinna. Daaqadda Output ah, waxaad badbaadin kartaa sida MOV, MP4, wmv, iwm loo maqli siman on PC ama aaladaha la qaadi karo. Sidoo kale, waxaad gubi karaa video RMVB in ay qaab DVD inay ku raaxaystaan ​​on TV ama ciyaaryahan kasta DVD. Ka dib dooranaya qaab ku habboon, ku dhacay Abuur, oo aad samaysay.